ဖုန်းဘက်ထရီက ဘာလို့ ခဏခဏ ကုန်နေရတာလဲ? - For her Myanmar
ဒီထဲက တစ်ချက်မဟုတ် တစ်ချက်တော့ ငြိကို ငြိမှာ.. ကျိန်းသေတယ်!!!
စာအုပ် ဖတ်လို့ကောင်းတုန်း ရှိသေး.. ဖုန်းအားက ကုန်သွားပြန်ပြီ!!! FB သုံးလို့ကောင်းတုန်းရှိသေး… ဖုန်းအားက ကုန်သွားပြန်ပြီ !! ဗီဒီယို ကြည့်ကောင်းတုန်း ရှိသေးတယ်… ဖုန်းအား ကုန်ပြန်ပြီ!! ဟော.. ဂိမ်းဆော့ရင်း တန်းလန်း အားကုန်သွားပြန်ပြီ ဆိုတော့ကာ… ဘာကြောင့်များ ဖုန်းအားတွေက ဒီလောက် ကုန်ကုန် နေရတာလဲ?
၁) ဖုန်းကို တစ်ညလုံး အားသွင်းထားလို့။
တချို့ဖုန်းတွေမှာ ဖုန်းအားပြည့်ရင် အားသွင်းထားတာကို အလိုအလျောက် ဖြတ်ပေးတဲ့ စနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ မပါဘူးပေါ့လေ… အဲဒီစနစ် မပါဝင်တဲ့ ဖုန်းတွေက ဘက်ထရီ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်သွားပြီးတာတောင် ထပ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက် လိုတာထက် ဖုန်းကို ပိုပင်ပန်းစေပြီး ဘက်ထရီကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဖုန်းဘက်ထရီ ယိုယွင်းလာတဲ့အခါမှာ ဖုန်းအားခဏခဏ ကုန်တာက မဆန်းတော့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။
၂) မလိုတဲ့ Background App တွေ အများကြီး ဖွင့်ထားလို့။
မလိုအပ်တဲ့ App တွေ အများကြီးစာအတွက် အလုပ်လုပ်နေရခြင်းက ဖုန်းဘက်ထရီကို ခဏချင်း အားကုန်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဖုန်း Setting ထဲ device maintenance > battery > always sleeping app > add app ထဲဝင်ပြီး သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့ Application တွေကို ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။
အဲဒီလို လုပ်လိုက်ရင်တော့ ပိတ်ထားတဲ့ Application တွေရဲ့ Notification တွေကတော့ တက်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖုန်းက ကိုယ် တကယ် လိုအပ်တဲ့ Application တွေ အတွက်ပဲ အလုပ်လုပ်ရတော့ ဖုန်းဘက်ထရီကုန်တာ ပိုသက်သာစေပါတယ်။
၃) Home screen widgets တွေနဲ့ Live wallpaper တွေကြောင့်။
ဖုန်း home screen widgets နဲ့ live wallpaper တွေက ဘက်ထရီ ပိုကုန်စေပါတယ်။ Live wallpaper တွေက လှတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမဲ့ သူက animation ဆိုတဲ့အတိုင်း လှုပ်နေတော့ ဖုန်းဘက်ထရီကို သာမန်wallpaper တွေထက် ပိုပြီးကုန်စေတာ အသိသာကြီးပါ။ Home Screen မှာလည်း widgets တွေ အများကြီးမထားဘဲ လိုသလောက်ပဲ ထားတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
လင်းလေ ကုန်လေပါရှင်… ဖုန်းမျက်နှာပြင်အလင်းရောင်ကို ပုံမှန်အလင်းရောင်လောက်ပဲ ထားပေးပါ။ အရမ်းလင်းအောင်ထားတာက ဖုန်းဘက်ထရီအားကို ကုန်စေသလို မျက်စိအားကိုလည်း ကုန်စေပါတယ်နော်… အလင်းစူးလွန်းတာက ယောင်းရဲ့ မျက်လုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်မှာ ကျိန်းသေပါပဲ။ ဒါကြောင့် Automatic Brightness ကို ပိတ်ပြီး အလင်းကို လျှော့ထားတာက ဖုန်းဘက်ထရီကုန်တာ အများကြီး သက်သာစေမှာပါ။
Related Article >>> Facebook ကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း အသုံးပြုနိုင်အောင် Security မြှင့်ပြီး သုံးကြမယ်။
၅) ဖုန်းဘက်ထရီအား ကုန်တဲ့ထိ သုံးတာ။
ဖုန်းအားကို အကုန်ကုန်အောင်သုံးတာက ဖုန်းဘက်ထရီကို အရမ်းထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဖုန်းအားတွေ ခဏခဏ ကုန်၊ ကုန်တာလည်း အားလုံးဝ မကျန်တော့တဲ့ထိ ထား၊ အဲဒါနဲ့တင် ဂျာအေး သူ့အမေရိုက်တော့တာပါပဲ။
ဖြစ်သင့်တာက ဖုန်းကို အားကုန်တဲ့ထိ မထားဘဲ အလွန်ဆုံး ၁၅% ထိပဲထားပါ။ အန္တရာယ်အကင်းဆုံးကတော့ ၄၀% ကျော်ကျော်လောက် ထားထားတာပါပဲ။ ၁၅% အောက်တော့ လုံးဝ မကျစေနဲ့နော်…
၆) ဖုန်းအားသွင်းရင်းနဲ့ ဖုန်းသုံးတာ။
ဟေး.. ဒါလုပ်နေကျမလား 😛 ဖုန်းသုံးနေတုန်း အားကုန်သွားရင် အားသွင်းကြိုးတန်းလန်းကြီးနဲ့ ဖုန်းဆက်သုံးနေတတ်တဲ့ ချိမတို့ ရှိတ်လက်ပါအူး.. :3 တကယ်တော့ ဒီလို အားသွင်းရင်းဖြစ်စေ၊ Power Bank နဲ့ တွဲပြီးဖြစ်စေ အားသွင်းရင်း ဂိမ်းဆော့တာမျိုး၊ ဖုန်းသုံးနေတာမျိုးက ဖုန်းဘက်ထရီကို အတော်ကြီး ထိခိုက်စေနိုင်တာပါ။ အဲဒီမှာပဲ ဖုန်းအား ခဏခဏကုန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းက စတော့တာပါပဲ။
ဒီလို အားသွင်းရင်း ဖုန်းဆက်သုံးတာက ယောင်းတို့အတွက်လည်း အန္တရာယ်များတယ်နော်။ ဖုန်းဘက်ထရီ ဖောင်းပြီး အပူလွန်ကဲလာတဲ့အခါ ပေါက်ကွဲတာတွေ ဖြစ်နိုင်လို့ ဖုန်းအားကုန်သွားတယ်ဆိုရင် ဖုန်းသုံးတာရပ်ပြီး ဖုန်းအားသွင်းလိုက်ပါ။
အပေါ်က အချက်တွေထဲကဘယ်နှစ်ချက်တောင် လုပ်မိနေပြီလဲ ယောင်းလေးတို့။ ခုဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့ရဲ့ ဖုန်းဘက်ထရီတွေ ကြာကြာခံအောင် ဘယ်လို သုံးရမလဲဆိုတာ သေချာသိသွားလောက်ပြီ ထင်တယ်နော်… အဆင်ပြေကြပါစေ ယောင်းတို့ရေ…
References : pcmag ,zdnet
ဒီထဲက တဈခကျြမဟုတျ တဈခကျြတော့ ငွိကို ငွိမှာ.. ကြိနျးသတေယျ!!!
စာအုပျ ဖတျလို့ကောငျးတုနျး ရှိသေး.. ဖုနျးအားက ကုနျသှားပွနျပွီ!!! FB သုံးလို့ကောငျးတုနျးရှိသေး… ဖုနျးအားက ကုနျသှားပွနျပွီ !! ဗီဒီယို ကွညျ့ကောငျးတုနျး ရှိသေးတယျ… ဖုနျးအား ကုနျပွနျပွီ!! ဟော.. ဂိမျးဆော့ရငျး တနျးလနျး အားကုနျသှားပွနျပွီ ဆိုတော့ကာ… ဘာကွောငျ့မြား ဖုနျးအားတှကေ ဒီလောကျ ကုနျကုနျ နရေတာလဲ?
၁) ဖုနျးကို တဈညလုံး အားသှငျးထားလို့။
တခြို့ဖုနျးတှမှော ဖုနျးအားပွညျ့ရငျ အားသှငျးထားတာကို အလိုအလြောကျ ဖွတျပေးတဲ့ စနဈပါဝငျပါတယျ။ တခြို့ဖုနျးတှမှောတော့ မပါဘူးပေါ့လေ… အဲဒီစနဈ မပါဝငျတဲ့ ဖုနျးတှကေ ဘကျထရီ ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး ပွညျ့သှားပွီးတာတောငျ ထပျအလုပျလုပျရတဲ့အတှကျ လိုတာထကျ ဖုနျးကို ပိုပငျပနျးစပွေီး ဘကျထရီကို ပကျြစီးစပေါတယျ။ ဖုနျးဘကျထရီ ယိုယှငျးလာတဲ့အခါမှာ ဖုနျးအားခဏခဏ ကုနျတာက မဆနျးတော့တဲ့ ကိစ်စတဈခုပါ။
၂) မလိုတဲ့ Background App တှေ အမြားကွီး ဖှငျ့ထားလို့။
မလိုအပျတဲ့ App တှေ အမြားကွီးစာအတှကျ အလုပျလုပျနရေခွငျးက ဖုနျးဘကျထရီကို ခဏခငျြး အားကုနျစနေိုငျပါတယျ။ ဒီအတှကျ ဖုနျး Setting ထဲ device maintenance > battery > always sleeping app > add app ထဲဝငျပွီး သိပျမသုံးဖွဈတဲ့ Application တှကေို ပိတျထားလို့ရပါတယျ။
အဲဒီလို လုပျလိုကျရငျတော့ ပိတျထားတဲ့ Application တှရေဲ့ Notification တှကေတော့ တကျလာတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဖုနျးက ကိုယျ တကယျ လိုအပျတဲ့ Application တှေ အတှကျပဲ အလုပျလုပျရတော့ ဖုနျးဘကျထရီကုနျတာ ပိုသကျသာစပေါတယျ။
၃) Home screen widgets တှနေဲ့ Live wallpaper တှကွေောငျ့။
ဖုနျး home screen widgets နဲ့ live wallpaper တှကေ ဘကျထရီ ပိုကုနျစပေါတယျ။ Live wallpaper တှကေ လှတယျဆိုတာ မှနျပမေဲ့ သူက animation ဆိုတဲ့အတိုငျး လှုပျနတေော့ ဖုနျးဘကျထရီကို သာမနျwallpaper တှထေကျ ပိုပွီးကုနျစတော အသိသာကွီးပါ။ Home Screen မှာလညျး widgets တှေ အမြားကွီးမထားဘဲ လိုသလောကျပဲ ထားတာက အကောငျးဆုံးပါပဲ။
ပှဲအကွောငျး အသေးစိတျသိလိုပါက >>> http://bit.ly/2WK7oFQ
လငျးလေ ကုနျလပေါရှငျ… ဖုနျးမကျြနှာပွငျအလငျးရောငျကို ပုံမှနျအလငျးရောငျလောကျပဲ ထားပေးပါ။ အရမျးလငျးအောငျထားတာက ဖုနျးဘကျထရီအားကို ကုနျစသေလို မကျြစိအားကိုလညျး ကုနျစပေါတယျနျော… အလငျးစူးလှနျးတာက ယောငျးရဲ့ မကျြလုံးကို ထိခိုကျစနေိုငျမှာ ကြိနျးသပေါပဲ။ ဒါကွောငျ့ Automatic Brightness ကို ပိတျပွီး အလငျးကို လြှော့ထားတာက ဖုနျးဘကျထရီကုနျတာ အမြားကွီး သကျသာစမှောပါ။
Related Article >>> Facebook ကို အန်တရာယျကငျးကငျး အသုံးပွုနိုငျအောငျ Security မွှငျ့ပွီး သုံးကွမယျ။
၅) ဖုနျးဘကျထရီအား ကုနျတဲ့ထိ သုံးတာ။
ဖုနျးအားကို အကုနျကုနျအောငျသုံးတာက ဖုနျးဘကျထရီကို အရမျးထိခိုကျစပေါတယျ။ ဒါနဲ့ပဲ ဖုနျးအားတှေ ခဏခဏ ကုနျ၊ ကုနျတာလညျး အားလုံးဝ မကနျြတော့တဲ့ထိ ထား၊ အဲဒါနဲ့တငျ ဂြာအေး သူ့အမရေိုကျတော့တာပါပဲ။
ဖွဈသငျ့တာက ဖုနျးကို အားကုနျတဲ့ထိ မထားဘဲ အလှနျဆုံး ၁၅% ထိပဲထားပါ။ အန်တရာယျအကငျးဆုံးကတော့ ၄၀% ကြျောကြျောလောကျ ထားထားတာပါပဲ။ ၁၅% အောကျတော့ လုံးဝ မကစြနေဲ့နျော…
၆) ဖုနျးအားသှငျးရငျးနဲ့ ဖုနျးသုံးတာ။
ဟေး.. ဒါလုပျနကေမြလား 😛 ဖုနျးသုံးနတေုနျး အားကုနျသှားရငျ အားသှငျးကွိုးတနျးလနျးကွီးနဲ့ ဖုနျးဆကျသုံးနတေတျတဲ့ ခြိမတို့ ရှိတျလကျပါအူး.. :3 တကယျတော့ ဒီလို အားသှငျးရငျးဖွဈစေ၊ Power Bank နဲ့ တှဲပွီးဖွဈစေ အားသှငျးရငျး ဂိမျးဆော့တာမြိုး၊ ဖုနျးသုံးနတောမြိုးက ဖုနျးဘကျထရီကို အတျောကွီး ထိခိုကျစနေိုငျတာပါ။ အဲဒီမှာပဲ ဖုနျးအား ခဏခဏကုနျတဲ့ ဇာတျလမျးက စတော့တာပါပဲ။
ဒီလို အားသှငျးရငျး ဖုနျးဆကျသုံးတာက ယောငျးတို့အတှကျလညျး အန်တရာယျမြားတယျနျော။ ဖုနျးဘကျထရီ ဖောငျးပွီး အပူလှနျကဲလာတဲ့အခါ ပေါကျကှဲတာတှေ ဖွဈနိုငျလို့ ဖုနျးအားကုနျသှားတယျဆိုရငျ ဖုနျးသုံးတာရပျပွီး ဖုနျးအားသှငျးလိုကျပါ။
အပျေါက အခကျြတှထေဲကဘယျနှဈခကျြတောငျ လုပျမိနပွေီလဲ ယောငျးလေးတို့။ ခုဆိုရငျတော့ ယောငျးတို့ရဲ့ ဖုနျးဘကျထရီတှေ ကွာကွာခံအောငျ ဘယျလို သုံးရမလဲဆိုတာ သခြောသိသှားလောကျပွီ ထငျတယျနျော… အဆငျပွကွေပါစေ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: battery, brightness, Destroy, In, life, off, Phone, plug, power bank